Wɔkamfoo Greenlandic Watchtower No Wɔ TV Do
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Malay Mfantse Nahuatl (Central) Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Uzbek Valencian Xhosa Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Obodur January 2013 mu no, nna woetsintsim The Watchtower no mfe 40 wɔ Greenlandic kasa mu. Greenlandic no yɛ Inuit kasa a nyimpa 57,000 pɛ na wɔkã.
Jehovah Adasefo bɛyɛ 150 pɛ na wɔwɔ Greenland, naaso wɔakyekyɛ Greenlandic Watchtower no dodow 2,300. Iyi kyerɛ dɛ, hɔn a wɔkenkan Watchtower no, (wɔ Greenlandic kasa mu no, wɔfrɛ Watchtower no Napasuliaq Alapernaarsuiffik) hɔn mu pii nnyɛ Jehovah Adasefo.
Aber a wobisabisaa nyia ɔhwɛ hɛn kasa asekyerɛ edwuma do wɔ Nuuk kurow mu no nsɛm wɔ TV do no, ɔkãa dɛ: “Greenlandfo no mu pii enyi gye Bible no ho, na ɔno ntsi na wɔkenkan Napasuliaq Alapernaarsuiffik no.”
Aber a nyia obisabisa nsɛm no bisaa Greenlandic kasa asekyerɛfo no mu kor dza n’enyi gye ho wɔ magazine no ho no, oyii ano dɛ: “Mankasa menya magazine no a mekenkan no do mfaso. Dɛ nhwɛdo no, ɔkyerɛɛ me mbrɛ mubotum atsena ase ma meenya apɔwmudzen pa. Nna mehyew paa, ɔmmfa ho dɛ minyim dɛ obotum epira m’apɔwmudzen no. Naaso Bible no kã kyerɛ hɛn dɛ, sɛ yɛpɛ dɛ yenya apɔwmudzen pa dze a, ɔsɛ dɛ yɛma hɛn nyimpadua no ho tsew.”
Wɔkãe wɔ TV do dwumadzi no mu dɛ, Jehovah Adasefo akã asɛmpa no wɔ Greenland ofitsi afe 1954 hɔ beebi, na woetsintsim mbuukuu nye nwomaba ahorow so wɔ Greenlandic kasa mu. Danish nye Greenlandic kasa asekyerɛ edwuma no nyinara, etuhoakyɛfo na wɔyɛ, na wɔdze ayɛ hɔn botae aber nyina dɛ wɔbɛma Greenlandic kasa a wɔakyerɛ ase no ayɛ dɛ mbrɛ wɔkã no na ɔyɛ dɛw so.
Onyimpa bi a wɔayɛ Ɔdasefo akyɛr wɔ Greenland no kãa dɛ: “Medze mfe 25 akã asɛmpa no wɔ Greenlandfo no mu, na meebohu mfaso a ɔwɔ do dɛ yebenya hɛn nwoma ahorow no wɔ hɔn kasaa mu no. Yɛwɔ nkorɔfo bi tsetse ekyikyir beebi, a hɛmba nkotsee na yebotum dze akɔ hɔn nkyɛn abosoom kakraabi wɔ afe no mu. Na osiandɛ hɔn enyi gye ho dɛ wɔbɛkenkan hɛn magazine ahorow no ntsi, sɛ mber nndur dɛ yɛbɔkɔ kurow mu hɔ mpo a, yetum mona hɔn nkrataa nye nwoma ahorow.”
Ofitsi January 2013 mu no, yetsintsim Watchtower a yɛdze ma amamfo nye dza adzesua nsɛm wɔ mu no nyinara wɔ Greenlandic kasa mu. Wɔ jw.org wɛbsaet yi do no, sɛ ekɔ “Nwoma Nye Dza Ɔkã Ho” ɔfã no a, ibotum apaw magazine ahorow yi wɔ Greenlandic kasa mu na aaklek “Hwehwɛ” no do.